Iphinde yashiya isililo iRichards Bay ishoshela phambili kwiNedbank Cup - Impempe
Iphinde yashiya isililo iRichards Bay ishoshela phambili kwiNedbank Cup
Bekushube kanje koweTS Sporting neRichards Bay
Kufanele bazinuke amakhwapha abadlali beTS Sporting kulandela ukukhishwa kwabo yiRichards Bay ngo 2-1 kwiNedbank Cup ngokubona komqeqeshi wayo uKabelo Sibiya.
Abantfu Bemthetho bayeke ithuba lokudlulela phambili kwiNedbank ivumela ukuthi iRichards Bay ibuye seliyoshona ngeSonto eMbombela Stadium eNelspruit.
Okwenza lo mqeqeshi akhulume sakusokola ukuthi iqembu lakhe bekulifanele ukunqoba lapha futhi isikhathi elishaye ngaso igoli lokuvula inkundla bekungafanele kube ilona eligcina ngokuwasha ijezi.
“Bekufanele siwunqobe lo mdlalo kodwa asikwenzanga lokho. Yikuphi okufanele kwenzeke uma usulithole kuqala igoli?
“Sikwenze kahle konke futhi bekufanele zithi ziya ekhefini sibe sesihamba phambili. Indlela yokudlala ibiqondile salishaya kuqala igoli kodwa sabadedela ukuthi babuye.
“UMayo (Khanyisa) besibazi ubungozi bakhe kuma-freekick. Ngicabanga ukuthi besingenza kangcono lapho sibaphe khona iphenathi abashaye ngayo igoli lokuqala.
“Bekungelula kubadlali manje ngeke ngikhale kakuhlu,” kusho uSibiya. Kube amagoli amabili kaMayo awaqulele enethini umdlalo usuyophela aweze iNatal Rich Boys kulo mqhudelwano ekhombisa izimpawu zokudlondlobala kuwona.
UMayo obese kungokwesibili kulandelana ukuthi ashayele iRichards Bay amagoli amabili emdlalweni ushaya la magoli nje, iqembu lakhe belilandela ngemuva kulandela ukuthi iSporting ishaye igoli lokuvula inkundla ngomzuzu ka-72.
Elokuqala likaMayo kube iphenathi ngomzuzu ka-77 okube yilona ebuya ngalo iRichards Bay kwadlula imizuzu embalwa lo mgadli wayibhakuzisa futhi eseshaya elokuwina.
USibiya uthi asisekho isidingo sokuzidabukela kepha kusemqoka ukuthi bazithintithe bafake wonke umfutho kweyeGladAfrica Championship.
“Kusemqoka ukuthi abadlali bazinuke amakhwapha ngaphambi kokuqala amalungiselelo omdlalo wethu neJomo (Cosmos) kwiligi.
“Kulapho siphila khona ngakho ukuphuma kwiNedbank kusinika ithuba lokugxila kahle kwiGladAfrica Championship,” kusho yena.
Previous Previous post: Izikhokhisele ngesibhaxu ngokuphoxwa kwayo iSundowns
Next Next post: Ihlazo iChiefs iphendulwa ompushana koweCAF